Naya Drishti | नयाँ सरकार गठन र जसपाको भुमिकाबारे नेता महतो के भन्छन ? होला त उपेन्द्रमाथि कारवाही ? - Naya Drishti नयाँ सरकार गठन र जसपाको भुमिकाबारे नेता महतो के भन्छन ? होला त उपेन्द्रमाथि कारवाही ? - Naya Drishti
वैशाख २८, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धन सरकारका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा देखिएको मत विभाजन बाधक बनेको छ । जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले सत्ता गठबन्धनको नयाँ प्रयासमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको जानकारी संसद् सचिवालयले गराएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।
कानुनविद्हरुका अनुसार संविधानको धारा ७६ को २ ले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत खोजेकाले सांसद थपथाप गरेर बहुमत पुर्याउने कुराको अर्थ छैन । त्यसैले नयाँ सरकार निर्माणका लागि जसपाको औपचारिक विभाजन र एमालेका झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षको सांसदको राजीनामा अनिवार्य बनेको छ ।
तीन दिनभित्र जसपाको औपचारिक विभाजन सम्भव नभएको जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताए ।
उपेन्द्र यादवको मात्र हस्ताक्षर गरेर गठबन्धन सरकार निर्माण नहुने महतोको जिकिर छ । ‘जसपा एउटा पार्टी हो । कुनै व्यक्ति सरकारमा जान्छु भनेर विज्ञप्ति निकाल्दैमा कसरी सरकार बन्छ ? उपेन्द्र यादव भनेको दल होइन । जसपाको प्रत्येक अध्यक्ष दल हो, म यो गर्छु भन्न पाउँदैन । त्यस्तो हो भने जो प्रथम अध्यक्षले लिने निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक लाइन हुन्छ,’ उनले भने ।
वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुटेका जसपामा हजारौं कार्यकर्ता उपेन्द्र यादवलाई कुर्सी दिलाउन पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको महतोको भनाइ छ ।
‘हामी कुनै व्यक्तिलाई कुर्सी दिलाउन एकता भएका होइनौं । कुनै पनि नेता कार्यकर्ता पार्टी विभाजन गराएर सत्तारोहण गराइदिन जन्मेको होइन । पार्टी पनि जन्मेको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यो फोरम होइन । एक्लै उपेन्द्र यादव दौडेर सरकारमा गएर जनतालाई धोका दिने काम गर्न सक्नुहुन्न । जसपामा कसैको त्यस्तो चल्दैन । कसैले सपना नदेखे हुन्छ ।’
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउन नसक्ने पनि महतोले दाबी गरे । ‘देउवाजी सरकार बनाउन सक्नुहुन्न । राष्ट्रपतिजीलाई पार्टी चाहिएको हो । म फेरि पनि भन्छु जसपा सरकारमा जाँदैन जाँदैन…,’ उनले भने ।
उपेन्द्र यादवको सत्तालिप्सा पूरा नहुने पनि महतोले जिकिर गरे । ‘पार्टी फुटाएर अर्को दल बनाएर नयाँ सरकार बनाउन ​सकिला । तर, त्यसका लागि कार्यकर्ता तयार छैन । पार्टी फुटाउन फेरि लामो प्रक्रिया छ । तीन दिनमा सम्भव नै छैन । तीन महिना लाग्छ । कसरी उपेन्द्र यादवको सत्तालिप्सा पूरा हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
महतोका अनुसार एमालेको खनाल नेपाल पक्षका सांसदको साथ सहयोगबाट पनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छैन ।
उनले भने, ‘अब कुनै माधव नेपालले पनि गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्दैन । माधव नेपालको पनि पार्टी चाहियो नि ! माधव नेपालको पार्टी खोइ ? काँग्रेस र माओवादी पार्टीको बहुमत पुग्दैन । जसपा जाँदैन ।’
काँग्रेस सभापति देउवालाई सरकार बन्न सक्दैन भनेर भेटेरै सूचना दिएको महतोले बताए । उनले भने, ‘जसपा सरकारका लागि तयार छैन । चुनावी सरकारमा जाँदा त्यतिबेला सोचौँला । किर्ते गतिविधिमा नफस्नुस्, धोका हुन्छ तपाईंलाई भनेर देउवाजीलाई हामीले प्रष्टरुपमा भनेको थियौं ।’
महतोका अनुसार जसपा सरकारमा नजाने र कुनै गठबन्धनमा सामेल नभएको कुरा प्रथम अध्यक्ष (महन्थ ठाकुर) ले राष्ट्रपतिलाई लेखेर दिनेछन् । त्यसपछि गठबन्धनको सरकार बनाउने खेल खत्तम हुने उनको दाबी छ । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढी देखिएको महतोको विश्लेषण छ ।
‘उपेन्द्र यादवमाथि कारवाही हुन्छ’
उपेन्द्र यादवको सत्तामोहका कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेका महतो भनाइ छ । तर, उनले आफ्नो ताकत रहेसम्म पार्टी विभाजन रोक्न लागिपर्ने उनले बताए ।
आफ्नै लचकताका कारण आजसम्म जसपालाई विभाजनबाट रोक्ने काम गरेको महतोले बताए । तर, अब उपेन्द्र यादवमाथि कारबाही हुने उनको भनाइ छ । ‘उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अपराध गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँलाई अब कारबाही हुन्छ । पार्टी उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गर्छ । गठनबन्धको सरकार निर्माणमा लागि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर कि गर्नुभयो ? यो पार्टी निर्णय विपरीत छ । पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।
– लोकेन्द्र भट्ट / रातोपाटी
[email protected]shti.com , [email protected]